In Ka Badan Lixdan Ruux Oo Ku Dhintay Dooni La Dhacday Dalka Congo. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA In Ka Badan Lixdan Ruux Oo Ku Dhintay Dooni La Dhacday Dalka...
In Ka Badan Lixdan Ruux Oo Ku Dhintay Dooni La Dhacday Dalka Congo.
Mas’uuliyiinta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa sheegay in dad ka badan 60 qof ay dhinteen kaddib markii doon ay saarnaayeen ay ku dhacday Wabiga Congo.
300 oo ruux ayaa laga soo badbaadiyay shilkaas balse waxaa suuragal ah in aan wali laga warqabin xaaladda 200 oo kale.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in doonta ay ku dhacday dhagax iyadoo mareysa wabiga ku yaalla bariga caasimadda Kinshasa, maadaama ay safreysay xilli habeen ah oo ay mamnuuc tahay in ay doomaha socdaan.
Wasiirka arrimaha bani’aadannimada ee Congo, Steve Mbikayi, ayaa dalbaday in la maxkamadeeyo dadka mas’uulka ka ah shilkaas.
Bartiisa Twitter-ka ayuu kusoo qoray: “Doon buux dhaaftay oo habeennimo safrineysay 700 oo rakaab ah ayaa qallibantay! 60 meyd ayaa durba la helay halka 300 ay badbaadeen! Waan u tacsiyeyneynaa qoysaska ay dadka ka dhinteenwaxaana dalbaneynaa in cunaqabateyn lagu soo rogo dadka arrintan mas’uulka ka ah ee ku jira waaxda gaadiidka.”
Waddooyinka dalka Congo ayaa aad u yar inta badan dadkana waxay ku socdaalaan wabiga.
Previous articleCajisku Waxa U Lumiya Fursadda!
Next articleTirada Dad lagu Eedeeyay faafinta Diinta Kiristaanka oo Ciidammada Boolisku ku Xidheen Magaalada Hargeysa
Jubbaland “Kenya bixitaankeeda naguma wargelin balse anagaa qorshe la imaaneyno”
Faahfaahinta:Dhimashada iyo Dhaawac Dagaalkii jabhada caare iyo ciidanka somaliland ku dhex...